ဒူဒူကြီး: Control Valves (၁)
Control Valves (၁)
control valves, actuators, controllers နဲ့ sensors ဆိုတဲ့၊ "Control Hardware" တွေဟာ၊ process control system တခုမှာပါဝင်လေ့ရှိတဲ့၊ အခြေခံ Hardware တွေဖြစ်ပါတယ်။ valve အမျိုးအစား အမြောက်အများရှိတဲ့အနက်၊ spindle movement အရ ခွဲခြားကြည့်တဲ့အခါ၊ linear movement valves နဲ့ rotary movement valve ဆိုပြီး၊ (၂) မျိုး သာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ linear movement valves တွေကတော့ gate valve, globe valve နဲ့ slide valves တွေဖြစ်ပြီး၊ rotary movement valve တွေကတော့၊ ball valves, butterfly valves နဲ့ plug valves တွေဖြစ်ပါတယ်။ control valves ဆိုတာကတော့ valve spindle movement ကိုလိုအပ်သလို၊ ရွှေ့လျားစေပြီး flow ကို control လုပ်တဲ့၊ valves တွေဖြစ်ပါတယ်။ valve spindle movement ကို၊ လက်နဲ့လှည့်ပြီး၊ flow ကို control လုပ်ကြသလို၊ electrical သို့မဟုတ် pneumatic actuator တွေကို၊ valve spindle မှာ တတ်ဆင်ပြီး၊ flow ကို control လုပ်ကြပါတယ်။
linear movement valves နဲ့ rotary movement valve တွေကို၊ control valve အနေနဲ့အသုံးပြုတဲ့အခါ၊ application ပေါါမူတည်ပြီး၊ 'throttle' အနေနဲ့ control လုပ်မှာလား၊ ဒါမှမဟုတ် 'mix' or 'divert' အနေနဲ့ control လုပ်မှာလား ဆိုပြီးရွေးချယ်ရပါတယ်။ 'throttle' အနေနဲ့၊ အသုံးပြုတဲ့အခါ၊ Two-port valves တွေဖြစ်တဲ့၊ linear movement valves အုပ်စုမှ၊ Globe valves နဲ့ rotary movement valve အုပ်စုမှ၊ ball valves, butterfly valves နဲ့ plug valves တွေကို တတ်ဆင်ပါတယ်။ 'mix' or 'divert' အနေနဲ့ အသုံးပြုတဲ့ အခါမှာတော့၊ Three-port valves တွေဖြစ်တဲ့၊ Piston type valve, Globe plug type valve နဲ့ Rotating shoe type valve တွေကို၊ တတ်ဆင်ကြပါတယ်။
ဒါပေမယ့် linear movement valve အုပ်စုမှ high capacity media flow တွေအတွက် အသုံးပြုနိုင်ခြင်း၊ valve open position မှာ flow ကို အနှောက်အယှက်မပေးခြင်း နဲ့ valve close position မှာလည်း လုံခြုံစိတ်ချရခြင်း အစရှိတဲ့၊ အားသာချက်တွေရှိတဲ့ gate valve ကိုတော့၊ control valve အနေနဲ့ အသုံးပြုလို့ မရနိုင်တာကိုလည်း၊ တွေ့ရပါတယ်။ throttling function အနေနဲ့ အသုံးပြုလို့မရသလို၊ valve cavitation ကြောင့်၊ flow pressure ကို လျှော့ကျစေတတ်တာတွေကြောင့်၊ control valve အနေနဲ့ အသုံးပြုလို့ မရတာဖြစ်ပါတယ်။
Fig. Two differently shaped globe valves
"Globe valves" တွေဟာ၊ throttling flow ကိုဆောင်ရွက်ပေးနိုင်တဲ့အတွက်၊ control valve အနေနဲ့ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ globe valve တလုံးမှာပါဝင်တဲ့ အဓိကအစိတ်အပိုင်းတွေကတော့၊ body, bonnet, valve seat နဲ့ valve plug လို့ခေါါတဲ့ trim, actuator နဲ့ ဆက်ထားတဲ့၊ valve spindle, trim valve stem နဲ့ bonnet ကြားမှ၊ sealing arrangement တို့ဖြစ်ပါတယ်။
Fig. Flow throughasingle seat, two-port globe valve
flow differential pressure (DP) လို့ခေါါတဲ့၊ valve အဝင်မှ၊ upstream pressure (P1) နဲ့ valve အထွက်မှ downstream pressure (P2) တို့ရဲ့ ခြားနားချက်ဟာ၊ valve အမျိုးအစား၊ valve အရွယ်အစား နဲ့ valve actuator operating တို့အပေါါမှာ၊ မူတည်ပြီး၊ ကွဲပြားခြားနားပါတယ်။ steam system မှာတော့၊ maximum differential pressure ဟာ၊ upstream absolute pressure နဲ့ တူညီပါတယ်။ ဒါ့အပြင် valve ပိတ်ထားစဉ်၊ downstream ဖက်မှာ vacuum condition လည်းဖြစ်ပေါါတတ်ပါသတဲ့။ closed water system is the maximum pump differential head. closed water system မှာတော့၊ maximum differential pressure ဟာ၊ maximum pump differential head နဲ့ တူညီပါတယ်။
Fig. Flow throughadouble seat, two-port globe valve
မြင့်မားတဲ့ flow medium ထုထည်ပမာဏဖြတ်စီးမယ့်၊ valve အကြီးစားတွေမှာ၊ orifice ရဲ့ အရွယ်အစား ဟာလည်း ကြီးမားသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ control valve အကြီးစားတွေပိတ်ဖို့၊ actuator မှ sufficient force ဆိုတဲ့ လုံလောက်တဲ့ အားနဲ့၊ spindle ကိုရွှေ့လျှားစေမှသာ၊ valve ဟာ ပိတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ spindle ကိုရွှေ့လျှားစေဖို့အတွက်၊ Required closing force ပမာဏကို၊ အများကြီးမသုံးပဲ၊ valve လုံစေဖို့ single seat တွေအစား၊ double seat တွေကိုသုံးကျပါတယ်။ ဒါပေမယ့် spindle မှာ၊ double seat တွေ တတ်တိုင်း၊ manufacturing tolerances တွေနဲ့၊ application ပေါါ မူတည်ပြီး၊ ပေါါပေါက်လာမယ့် coefficients of expansion တွေကြောင့်၊ valve မလုံနိုင်ဖူးရယ်လို့၊ ဆိုပါတယ်။
control valve leakage ဆိုတာကတော့၊ fully closed အနေအထားမှာ၊ ပေါါပေါက်လာမယ့်၊ valve ယိုစိမ့်မှုပမာဏကို၊ ဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ Class III standard double seat valve တွေဟာ၊ full flow မှာ၊ 0.1% လောက်သာ၊ leakage ရှိပါသတဲ့။ valve ကို Shut-off tightness အနေနဲ့ အလုံပိတ် ပါတယ်ဆိုမှ၊ 0.1% လောက် 'ယိုစိမ့်' နိုင်သေးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် valve ဆိုတာ၊ 'ယိုစိမ့်' တတ်တဲ့ သဘာဝရှိသမို့၊ control valves တွေမှာ၊ ခွင့်ပြုနိုင်တဲ့ leakage rates တွေကိုလည်း၊ သတ်မှတ် ပြဌာန်းထားရပါတယ်။ British Standard BS 5793 Part4(IEC 60534-4) မှာ၊ ခွင့်ပြုနိုင်တဲ့ leakage rates တွေကို သတ်မှတ်ထားတာတွေ့ရပါတယ်။ Class IV single seat valve တွေရဲ့ leakage rate ဟာ၊ (0.01% of full flow) လောက်ရှိပါတယ်။ Class V ဆိုရင်တော့၊ အပေါါမှာ ဖော်ပြထားတဲ့ "Leakage rate" ပုံသေနည်းကိုသုံးပြီး၊ တွက်ယူရပါတယ်။
Fig. Balanced single seat valve
closing force ပမာဏကို၊ အများကြီးမသုံးပဲ၊ valve လုံစေဖို့၊ double seat အစား၊ balancing mechanism ကိုထည့်သွင်း တတ်ဆင်ထားတဲ့၊ single seat valves တွေလည်း ရှိပါသေးတယ်။ Balanced single seat valves တွေဟာ အရွယ်အစားကြီးမားသလို၊ မြင့်မားတဲ့ differential pressure မှာ၊ အလုပ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။ valve plug ရဲ့ အပေါါဖက်မှာ၊ internal pathway ကိုထည့်သွင်းထားပါတယ်။ internal pathway space ဟာ၊ valve အတွင်းဝင်ရောက်လာမယ့် upstream fluid pressure အတွက် balancing chamber အဖြစ်ဆောင်ရွက်ပေးပါတယ်။ pressure ဟာ chamber အတွင်းမှာ၊ down-force အနေနဲ့ အောက်ဖက်မှာရှိတဲ့၊ valve plug ကို သက်ရောက်နေပါတယ်။ balancing upstream pressure နဲ့ closing force အတူပေါင်းကာ၊ ပိတ်စေပါတယ်။ အဲဒီအခါ actuator မှာ closing force ပမာဏကိုလျှော့ချ နိုင်ကာ၊၊ normal closing force လောက်သာ သုံးပြီး၊ valve ကို၊ ပိတ်ပါတယ်။
gate valves တွေ ကို၊ "Slide valves" တွေရယ်လို့ခေါါဆိုကြပါသေးတယ်။ spindle operated Slide valves တွေကို၊ ခွဲခြားကြည့်ရင်၊ wedge gate type နဲ့ parallel slide type ဆိုပြီး၊ တွေ့ရမှာ ဖြစ်သလို၊ (၂) မျိုးစလုံးကို၊ fluid flow isolating အတွက်အသုံးပြုကြပါတယ်။
Fig. Wedge gate valve
wedge gate type နဲ့ parallel slide type valves တွေဟာ၊ fluid flow ကို၊ tight shut-off အနေနဲ့၊ လုံလုံခြုံခြုံပိတ်ကာ တားဆီးနိုင်သလို၊ valve ကို တည်ဆောက်ထားတဲ့ ပုံသဏ္ဍန်အရ၊ ပြန်ဖွင့်တဲ့ အခါမှာလည်း၊ pressure drop ပမာဏ အနည်းငယ်ကိုသာ၊ ဖြစ်ပေါါစေပါတယ်။ automatic actuation အဖြစ် control valve အနေနဲ့ သုံးမယ်ဆိုရင်တော့ parallel slide type valves တွေကို၊ အသုံးပြုနိုင် ပါတယ်။
Fig. Parallel slide valve (manual operation)
parallel slide valve တွေဟာ၊ spring loaded sliding disc (၂) ခုကိုသုံးပြီး၊ tight shut-off အနေနဲ့၊ ပိတ်တာဖြစ်ပါတယ် valve ရဲ့ flow-path အတွင်းမှ၊ fluid pressure ကြောင့်၊ down stream disc နဲ့ seat အကြားမှာ၊ tight joint အနေနဲ့  ဖြစ်ပေါါလာပြီး၊ tight shut-off ကိုရရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။ power နဲ့ process industries တွေရဲ့ main feed-lines တွေ မှာ၊ အရွယ် အစားကြီးမားတဲ့၊ parallel slide valves တွေကို၊ isolate section အနေနဲ့အသုံးပြုကြပါတယ်။ အရွယ်အစားသေးငယ်တဲ့ small-bore parallel slides valves တွေကိုတော့၊ steam နဲ့ water services တွေမှာ၊ control valve အဖြစ်၊ အသုံးပြုလေ့ရှိကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် parallel slides valves တွေရဲ့ ဈေးနှုံး တန်ဖိုးဟာ မြင့်မားပါတယ်။ အခုနောက်ပိုင်းမှာ control valve အနေနဲ့ ဈေးနှုံးပိုမိုသက်သာတဲ့၊ actuated ball valves တွေနဲ့ piston type valves တွေကိုသာ၊ ရွေးချယ်အသုံးပြုကြပါတယ်။
Reference and Image credit to : Control Valves - ကိုထွန်း, Control Hardware : Electric/ Pneumatic Actuation, The Steam and Condensate Loop Book, ISBN 978-0-9550691-5-4, 2011. Copyright © 2012 Spirax-Sarco Limited, and Steam Engineering Tutorials.
Posted by ဒူဒူကြီး at 18:02
Control Valves (၉) - Control Valve Actuators and P...
Control Valves (၈) - Control Valve Characteristics...
Control Valves (၇) - Control Valve Sizing for Stea...
Control Valves (၆) - Control Valve Sizing for Stea...
Control Valves (၅) - Control Valve Sizing for Wate...
Control Valves (၄) - Control Valve Sizing for Wate...
Control Valves (၃) - Control Valve Capacity
Control Valves (၂)
Generator Synchronizing, Parallel Operation နဲ့ Lo...